Duqa Muqdisho oo hishiis la saxiixday Duqa Konya – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) iyo Duqa Magaalada Konya ee Dalka Turkiga MR.ibrahim uğur altay ayaa si wadajir ah u wada saxiixay heshiis la xariira Walaaleynta iyo Iskashiga Labada Magaalo, Waxa ayna iska kaashan doonaan Sagaal qodob oo muhiim u ah dhaqangalinta heshiiskan.
1. Maareynta qashinka iyo warshadeyntiisa
2. Gaadiidka Dadweynaha noocyadiisa kala duwan (Public transportation ).
3. Qorsheynta Magaalada iyo hagaajinta nidaamka adress yada Magaalada guud ahaan. (urban planning and adressing system )
4. Diiwaan galinta dadweynaha (Civic registration ) .
7. Isboortiga noocyadiisa kala duwan
8. Dhaqanka iyo
9. Kaabayaasha dhaqaalaha (Infrastructure ) .
Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa dhawaan gaaray Dalka Turkiga si ow kulamo ula qaato ,Mas’uuliinta dalkaas.
Iiraan oo Gacanta ku dhigtay Marakiib Shidaal